Khudaarta la qaboojiyey ee deg-degga ah
Udhiska Cadka Hilibka Hilibka La Qaboojiyey
Baradho la jarjaray oo la qaboojiyey
Basasha la jarjaray oo la qaboojiyey
Karootada la jarjaray ee la qaboojiyey
Carrabka Hilibka lo'da ee la kariyey
Xaleef Doofaar la kariyey oo barafaysan
Ulaha Hilibka Doofaarka la qaboojiyey
Digaag la jarjarey Oo Basbaas ah
Qaabka wax soo saarka mid ka mid ah lafaha bowdada digaaga oo laga saaray, ku dar 1/4 basal, 2 xaleef sinjibiil, 2 qaado oo khamri ah oo wax lagu kariyo, cad cad oo xoq ah, isku kari dhowr saacadood dheriga weyn, oo isticmaal fargeeto si aad u soo saarto tiro aan la tirin karin gogo 'hilibka bowdada god yar. 2.1 qaado oo budada basbaaska madow ah, 2 qaado oo khamri wax lagu kariyo, 1 qaado oo sooska fudud ah, 2 qaado oo khamri casaan ah, nus qaado oo ah basbaaska imika dhulka lagu daray, 2 qaado oo sooska oyster ah, 1 qaado oo sonkor ah, ...
Macaan Iyo Feeraha Fudud ee Fudud
Cunnooyinka Macmacaanka ah iyo kuwa dhadhanka ah (Macaan iyo Dabiicyo Fudud) waa saxan dhaqameed matala oo leh dhadhan macaan iyo dhanaan. Waxay u isticmaashaa feeraha doofaarka ee cusub maadada ugu weyn, hilibku waa mid cusub oo jilicsan, midabka saxanka la dhammeeyayna waa casaan dhalaalaya. "Macaan iyo dhanaan" waa dhadhan ay leeyihiin dhammaan cuntooyinka waaweyn ee Shiinaha. Feeraha doofaarka ee macaan iyo kuwa dhanaan waxay asal ahaan ka soo jeedaan Zhejiang waana saxanka caadiga ah ee Zhejiang. Feeraha doofaarka ee macaan iyo dhanaan ee dhabta ah ayaa si gaar ah ugu saabsan qaababka iyo ...
Hordhaca wax soo saarka Alaabta ceeriin waxay ka yimaadaan kawaanada xoolaha iyo shirkadaha diiwaangalinta dhoofinta ee Shiinaha. Alaabta ceyriinka ah ee laga soo dhoofiyo inta badan Faransiiska, Isbaanishka, Nederland qeexitaan iyo laadhuus, xira astaamo xarig ah Saamiga dufanka ilaa khafiifka ah waa 3: 7, dufan laakiin ma ahan mid dufan. Codso kanaal Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Xaaladaha keydinta Hoosudhaca Cryopreservation -18 system Nidaamka qaboojinta degdegga ah. Nidaamka qaboojinta CAS waa isku dyn ...
Hordhaca wax soo saarka Alaabta ceeriin waxay ka yimaadaan kawaanada xoolaha iyo shirkadaha diiwaangalinta dhoofinta ee Shiinaha. Alaabta ceyriinka ah ee la soo dhoofiyo badanaa waxay ka yimaadaan Faransiiska, Isbaanishka, Nederland, iwm qeexitaan dheeri ah, aqbal sifooyinka caadada Qiyaasta dufanka iyo khafiifka waa 3: 7, dufan laakiin ma ahan mid dufan. Codso kanaal Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Xaaladaha keydinta Cryopreservation ee ka hooseeya -18 meat Hilibka barafoobay waxaa loola jeedaa hilib la gowracay, pre-c ...
Soo bandhigida alaabta Qalabka ceeriin waxay ka yimaadaan kawaanada xoolaha iyo shirkadaha dhoofinta ee ka diiwaan gashan Shiinaha. Alaabta ceyriinka ah ee la soo dhoofiyo ayaa badiyaa laga keenay New Zealand iyo Australia. faahfaahin faahfaahin dheeraad ah, aqbal qaababka gaarka ah Codso kanaalka Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Xaaladaha keydinta Hoosudhaca Cryopreservation -18 system Nidaamka qaboojinta degdegga ah. Nidaamka qaboojinta CAS waa isku-darka aag-maskaxeed firfircoon iyo aag magnetic oo guurguura, ...
Basasha la qaboojiyey
Hordhaca badeecada Diiwaangeli alaabta ceyriinka ah, isticmaal basasha maqaarka jaalaha ah. Codso kanaal Ku habboon habeynta cuntada, silsiladda makhaayadaha iyo warshadaha kale. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaristii ugu dambeysay waxay muujineysaa in qiimaha nafaqada ee khudradda la qaboojiyey ay dhab ahaantii ka sarreyso khudradda caadiga ah ee cusub ...
DIYAARADA KOONFUR GALBEED EE SHHENJDING SHIJIAZHUANG HEBEI CHINA
Telefoonka: 0086- (0) 755-82450060
Sida Loogu Soo jiito Macaamiisha Hilibka Indu ...
Sida Looga Shaqeeyo Hilibka Cilmiyan Qoys ahaan
Ammaanka iyo Aqoonta Caafimaadka ee Ninka Cunnada ...